Sekungumzabalazo wokubalekela ihlathi manje | News24
Sekungumzabalazo wokubalekela ihlathi manje
ISITHOMBE: gallo images Umqeqeshi weGolden Arrows Shaun Bartlet uthwele njengoba iqembu lijabulela ukubuyela kwiPSL Absa Premiership emva nje kwesizini eyodwa ladliwa yizembe. Lapha kungeSonto emva kokuba leli qembu lidlale ngokulingana ngegoli n
IMIDLALO ye-Absa Premiership League esasilele izodlalwa nje phela ngoba sekugcinwa umthetho nje ukuze kuphothulwe imbenge kodwa oshampeni nezingqwele seziyaziwa.
Ngesonto eledlule iKaizer Chiefs iqophe umlando ngesikhathi idla umhlanganiso wesicoco seligi imidlalo yesizini esikuyona ingakaqedwa.
Ukuze AmaKhosi athathe isicoco seligi sesizini ka-2014/15 adlalisa okoshampeni bempela ngesikhathi exebula noma ezidlela amahlanga ngokushaya iPolokwane City ngo 4-1 kusasele imidlalo emithathu kuphothulwe isizini. Phela umdlalo weKhosi ubudlalelwa eFNB Stadium ngoLwesithathu olwedlule. Ukudlula ngelamahubo kanje kwaMaKhosi nokucacisa kusakhanya kukhumbuze abathandi abaningi bebhola indlela u-Alex Ferguson ayenza ngayo izinto ngezikhathi zakhe esekwiManchester United yase-England.
Phela iKhosi latshengisa ukuthi liya kude nokuthi lifuna ukusidla lesi sicoco mhla kuqalwa ngosuku lokuvulwa kwesizini lapho laqala ngokudla iFree State Stars ngo 1-0
emdlalweni wokuqala owabe use Charles Mopeli Stadium. Kusukela lapho iKhosi alibhekanga emuva, lishaya kwasani oluphambi kwalo laze lavula negebe elikhulu okwenza kube lukhuni kubo bonke ababecabanga ukulifica.
Isikhulu seChiefs uBobby Motaung uthi babeyazi into abayifunayo zisuka nja amadaka, wancoma nomqeqeshi uStuart Baxter nomsizi wakhe uDoctor Khumalo ngendlela abasebenzisane ngayo nabadlali.
UMotaung uyavuma ukuthi bekungelula kodwa ngendlela iqembu elisebenze ngayo lenze kwaba sengathi kulula.
“Bekulukhuni kwasatshe, phela ukwakha ithimu ibe oshampeni kudinga izinto eziningi. Nokuthi-ke umsebenzi wokuthatha isicoco uqala ngosuku lokuqala uma kudlalwa umdlalo wokuqala.
“Sibonga nje bonke abaqeqeshi nabadlali indlela abasebenze ngayo ukuze benze leli qembu oshampeni,” kusho uMotaung.
*Kanti ezinye izindaba ezimnandi kubathandi bebhola baseKwaZulu Natal ukuthi Abafana Bes’thende, iLamontville Golden Arrows eqeqeshwa uShaun Bartlett bagcine ngokudla umhlanganiso kwiNational First Division, bagcina bewine isicoco seligi nabo. Ngonyaka ozayo leli qembu selizodlala kwiPSL.
UBartlett obejabule futhi ekhala nezinyembezi uthe ubonga indlela abadlali nabalandeli nezikhulu ezimxhase ngayo ngesikhathi bezabalaza ehlathini.
“Bekunzima laphaya kwiNFD, kodwa ngincoma bonke abantu, ikakhulukazi nemindeni yethu nabadlali abasebenze kanzima isizini yonke,”kusho uBartlett.
Babuya nje Abafana Bes’thende elinye lamaqembu aKwaZulu-Natal, AmaZulu bazabalazela ukungangeni ehlathini. Badlale ne-University of Pretoria kanti umphumela ubungakabi bikho ngenkathi i-Echo iyoshicilela. Kuzothi ngeSonto Usuthu lutholane phezulu neMaritzburg United.
Kanti isiyonke imidlalo yokuphothula isizini ezodlalwa yonke ngoMgqibelo futhi ngehora lesithathu yonke imi kanje:
I-Wits ne Platinum Stars eBidvest Stadium, Ajax Cape Town ne Orlando Pirates eCape Town Stadium, Moroka Swallows ne Bloemfontein Celtic eDobsonville Stadium, Free State Stars ne Black Aces eGoble Park, Mamelodi Sundowns ne University of Pretoria eLucas Moripe Stadium, AmaZulu ne Maritzburg United eMoses Mabhida Stadium, Chippa United ne Kaizer Chiefs eNelson Mandela Bay Stadium, Polokwane City ne SuperSport United e-Old Peter Mokaba Stadium